पहिलो प्रयासमै शाखा अधिकृत कसरी सम्भव? - Everest Dainik - News from Nepal
पहिलो प्रयासमै शाखा अधिकृत कसरी सम्भव?
पूजा खत्री, काठमाडौं । ०६० सालमा भक्तपुरमा अवस्थित विद्याविकास माध्यमिक विद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेँ । प्लस टु उत्तीर्णपछि ०६३ सालमा काठमाडौं स्कुल अफ लमा भर्ना भएँ । ०६८ सालमा छात्रामध्येबाट स्नातक तहमा सर्वोत्कृष्ट स्थानमा उत्तीर्ण भएँ । त्यसबापत सम्माननीय राष्ट्रपति रामवरण यादवज्यूबाट नेपाल छात्रा विद्यापदकसमेत प्राप्त गरेँ । यस्तै, ०६९ सालमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को लाइसेन्सको परीक्षामा पनि सर्वोत्कृष्ट बन्न सफल भएँ । त्यही वर्ष शाखा अधिकृत पदका लागि लोकसेवामा आवेदन दिएकी हुँ ।
याे पनि पढ्नुस नासुमा मागभन्दा १६६ गुणा बढी आवेदन
शाखा अधिकृतको तयारी गर्दा स्नातक तहमा पढेका सामग्रीहरूले धेरै सहयोग ग¥यो । बजारमा लोकसेवाकै तयारीका लागि प्रकाशित पुस्तकबारे जानकारी थिएन । कुन किताब महत्वपूर्ण हो भन्ने पनि थाहा थिएन । लोकसेवासँग सम्बन्धित वा असम्बन्धित विभिन्न किताब संकलन गरेँ र पढेँ । पढ्ने तरिकाबारे साथीहरूसँग छलफल गर्थें । प्रायः धेरैजसो दोहोरिएका प्रश्नलाई महत्वपूर्ण दिन्थेँ । त्यस्ता पुराना प्रश्नपत्रहरूको संकलन गरी त्यसले खोजेको उत्तर लेख्थेँ । प्रश्नपत्रको समाधान गर्दा संकलित सामग्रीको सहायता लिन्थेँ । यसरी प्रश्नपत्र समाधान गर्दै जाँदा लगभग सम्पूर्ण विषयमा विस्तृत नोट नै बनेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस यसै साताबाट लोक सेवा विज्ञापन प्रक्रिया
आवश्यकताअनुसार विभिन्न किताब पढ्नुपर्दछ । गुणात्मक अध्ययन सामग्री संकलन गर्ने बानी बसाल्नु जरुरी छ । पढ्ने तरिका व्यक्तिपिच्छे फरक हुन्छ । भाषाशैली फरक हुन्छ । तर, विषयवस्तु भने एउटै हुन्छ । त्यसकारण कसैको नक्कल गर्नुभन्दा आफ्नै शैलीमा पढ्नुपर्छ । तर, जे–जस्तो शैली अपनाए पनि विषयवस्तुको नोट बनाउँदा वा प्रश्नको उत्तर लेख्दा ५ वटा ‘सी’ लाई ध्यान दिनुपर्दछ । त्यो भनेको कन्सेप्ट, कन्टेन्ट, कन्टेक्स्ट, क्रिटिकल एनालाइसिस र कन्क्लुजन । यस्तै, परीक्षा नजिकिँदै जाँदा नोटहरू हेर्ने, बुँदाहरू याद गर्नुपर्दछ । यो सामग्री नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
ट्याग्स: loksewa aayog, Puja Khatri